नारायणी अस्पताललाई पुनःकोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय : Birgunj's No. 1 News Portal
२०७७, १७ श्रावण शनिबार ११:३० Pradeep Sah	0 Comments
वीरगंज, १७ साउन । वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताललाई पुनःकोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ ।
नारायणीलाई पुनःकोभिड अस्पतालमा परिणत गर्न भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको पत्र शुक्रबार प्राप्त भएको अस्पतालका मेसु डा. मदन कुमार उपाध्यायले पुष्टि गरे ।
उनले पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नारायणी अस्पताललाई कोभिड २ लेभल अस्पताल बनाउने निर्देशिका बमोजिम तयारी गरिने बताए ।
यसअघि, मन्त्रालयले पाँच दिन पहिले नै अस्पतालको डायलिसिस लगायतको सेवा बन्द गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । यससँगै नारायणीमा हुदैं आएको डायलिसिस लगायतको सेवा फेरि नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।
यसअघि पनि नारायणी अस्पतालालाई कोरोना अस्पताल सम्पूर्ण जेनरल सेवा बन्द हुदाँ सर्वसाधारण सेवाग्राही मारमा परेका थिए । जनस्तरबाट व्यापक बिरोध भएपछि सरकारले त्यतिबेला अस्पतालमा रहेका संक्रमितहरु डिस्चार्ज भएपछि जनरल सेवा सूचारु गर्न लगाएको थियो । साभार: नेपाल पोष्ट डेली ।
← सांसद् प्रदीप यादवलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
ट्राफिक सचेतना जगाउँदै रोट्रयाक्ट भैरहवा →
सशस्त्र प्रहरी बल भिखमपुर द्वारा काठ सहित २ वता ट्रक्टर पक्राउ
२०७७, १२ भाद्र शुक्रबार १७:४१ दैनिक वीरगञ्ज 0
संगठन बिस्तार तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम कपिलवस्तुबाट शुरु
२०७६, ३ माघ शुक्रबार १६:३५ Prince Mishra 11
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च हरिऔन नगर कमिटी गठन
२०७६, १७ फाल्गुन शनिबार १७:२४ दैनिक वीरगञ्ज 8